Sihlaziya imicu exotic kakhulu ye-Smart materials 3D | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Kulokhu sikulethela enye indatshana ngo- ukuhlaziywa kwentambo lapho sibeke khona ubuchwepheshe bethu nekhono lethu lomenzi esivivinyweni sezinto zobuchwepheshe ezivela kumenzi Izinto ze-Smart 3D
I-Smartfil igama elinikezwe lonke uhla lwemicu evela kumkhiqizi waseSpain Smart Materials 3D ezinze eJaen. Ukuba nezinto zokwakha ezingaphezu kweshumi nambili, lapho sizohlaziya khona imikhiqizo yakho I-BOUN, GLACE, PLA 3D850 ne-EP futhi sizochaza ngokuningiliziwe yonke imininingwane yokusetshenziswa kwayo.
La iwebhusayithi yomkhiqizi ine- umklamo ohlanzekile futhi enembile futhi kulula ngathi ukuthola yonke imikhiqizo. Endabeni ngayinye sithola i- Xhumanisa kumhlahlandlela / ikhathalogi ku-PDF Amakhasi angu-38 lapho basethulela ngazo zonke izinto zokwakha kanye nezinga lokushisa lokuphrinta. Kodwa-ke, asikwazanga ukuthola amaphrofayili wokuphrinta wezisiki eziyinhloko noma imingcele yezobuchwepheshe ngaphezulu ezintweni zokwakha.
Esikhaleni sokuthengwa kwento ngayinye sikhumbula phrinta lokushisa, okushisa kombhede okushisayo, kanye no ithebula lokuqhathanisa ngobuningi, ukuqina, ukumelana nomthelela kanye nemingcele efanayo. Ngaphezu kwamanani athile onjiniyela abambalwa abangawaqonda, ngokwesibonelo itafula lamaphuzu le-1 - 5 ngokuqhathanisa okokusebenza okukhethwe ngezinto ze-PLA noma ze-ABS lapho abenzi abaningi benolwazi olwedlule. Kodwa-ke, ngokuxhumana nathi ngefomu elikuwebhusayithi uqobo, bazosinikeza imininingwane esiyifunayo, kufaka phakathi izeluleko zokuphrintwa kocezu oluthile.
para lokhu kuhlaziywa sisebenzise iphrinta ye-ANET A2 PLUS futhi. Yize kungumshini ibanga eliphansi (ngamanani entengo angaphansi kwe- € 200 uma siyithenga kusuka e-China) futhi singatholi imiphumela yemininingwane ephezulu kakhulu, ilungele izinto eziningi ezisemakethe. Ayinazici zobuchwepheshe ezingacabangi; ingaphrinta kuze kufike ku- 100 mm / s, ine-bowden type extruder, i-hotend ingashiswa kuze kufike ku-260 ° C, ingaphrinta ku Isixazululo se-micron esingu-100, ukulahlwa kwe isisekelo esishisayo futhi ube munye indawo enkulu yokuphrinta (220 * 220 * 270mm).
Senze imidwebo ngamabomu nge-infill ephansi kakhulu, sisebenzise izisekeli futhi asisebenzisanga fan yongqimba. Ngale ndlela, ngemibhalo embalwa nje, singakubonisa ukuthi izinto zokusebenza ziziphatha kanjani ezimweni ezimbi kakhulu.
1 Intambo yeSmartfil Boun
2 Intambo ye-Smartfil Glace
3 Intambo yombala ye-Smartfil PLA 3D850
4 Intambo ye-Smartfil EP
5 Isiphetho kuma-3D Smart materials Filaments
Intambo yeSmartfil Boun
Lokhu kwaziswa unezinye ukusebenza ngomshini okufana ne-polypropylene, ngiyabonga ukuguquguquka Izingxenye ezinesimo esiqinile ezimelana kakhulu nomthelela zingathuthukiswa, singathola izingxenye ngomphetho ohlukile futhi ngokuthinta okuthambile okumnandi okhumbuza irabha elinzima kuneplastiki.
Kuyinto elula kakhulu ukuphrinta kusukela ayidingi ukusebenzisa isisekelo esivuthayo, ayitholi ukuphambana noma ukusonteka ngesikhathi sokuphrinta kungakhathalekile ingxenye yosayizi. Ngenxa ye- ukubambelela okuphezulu eletha lokhu kwaziswa ngezicucu ezinesisekelo sokuphrinta esibanzi kakhulu, kuzodingeka ukusisusa ngokufaka amanzi esisekelweni. Le ntambo imhlophe ngombala okhumbuza amazinyo endlovu. Kwikhoyili banokuguquguquka okuguquguqukayo okuncane kepha ngeke sibe nezinkinga zokuminyana ku-extruder.
Iphrinta phakathi kuka-200 no-220º C bese ipholisa kancane Ngakho-ke, sincoma umlandeli wesendlalelo ngaso sonke isikhathi, yize kubaluleke kakhulu ezigabeni ezincanyana zezingcezu zethu.
Izingcezu ziveza izinga elithile le- ukuguquguquka futhi ngemuva kwengcindezi ukuthola ukwakheka kwayo kwangempela, kuphelele izingxenye okumele zimelane nemithelela. Izesekeli zinamathela kahle engxenyeni nasekwenzeni izinto zibe mhlophe lapho zisuswa khona.
Uma usebenzisa ukungena okuphansi kakhulu futhi ungasebenzisi ifeni lesendlalelo, kuyahlupheka lapho udweba amabhuloho. Kungakuhle ukwengeza ezinye izendlalelo ku-laminator ukuqedela ucezu ngaphandle kokushiya izimbobo.
Intambo ye-Smartfil Glace
Lokhu kwaziswa Yenziwe nge-polymer ye-thermoplastic nge izakhiwo zemishini eziphakeme kune-ABS ne-PLA, ukumelana okuhle komthelela nokuguquguquka okuphezulu. Ngaphandle kokugoqa izingxenye ezinkulu kangaka zingenziwa ngekhwalithi enhle kakhulu. Futhi isici esimangalisa kakhulu, ungafaka isicelo se- ukupholisha amakhemikhali notshwala ngendlela yokuthi izingcezu ezinokubonakala okuphezulu kanye nesiphetho esibushelelezi ngokuphelele zingenziwa. Lokhu kushelela kwenziwa ngomhwamuko wotshwala, ofana nokushelela kwe-ABS nge-acetone. Abakaki basuswa kalula ngaphandle kokushiya noma imaki futhi okokusebenza kuphola ngejubane elihle kakhulu ngakho-ke sizothola imiphumela emihle kakhulu ngaphandle kokusebenzisa ifeni lesendlalelo. Kwakhe ukuphrinta kufana kakhulu ne-PLA.
I-coil filament isobala ngokuphelele kepha njengayo yonke imicu ebonakalayo, ukushisa nokuhlukahluka ngesikhathi sokuphrinta kubangela ukuthi i- izingxenye eziphrintiwe ziyaguquguquka. Imiphumela emihle iyatholakala lapho uphrinta ungqimba owodwa noma ngenketho amanye ama-laminator ayifaka, imodi yokuvunguza noma imodi yeglasi. Noma kunjalo, lapho uthola izingcezu eziguqukayo, kunzima kakhulu ukuthwebula ukuphela kocezu ezithombeni noma ngeso lenyama.
Inqubo ye bushelelezi bamakhemikhali Singakwenza ngezindlela ezihlukile ngokuya ngezici zesiqephu esiphrintiwe; ngokufaka isicelo ngqo ngebhulashi engxenyeni engaphandle yocezu, ubeke lonke ucezu esenzweni somhwamuko wotshwala noma indlela enolaka kakhulu ngokufaka ngqo lonke ucezu otshwaleni. Indlela ngayinye izothola imiphumela ehlukile, lapho kuba nolaka kakhudlwana kunencazelo ebushelelezi kepha engaphansi.
Ucezu olungakwesobunxele lushelele ngokwamakhemikhali kusetshenziswa utshwala busetshenziswe ngqo ngebhulashi. Yize ukusobala kunzima ukukuqonda ukushelela kwesiqephu, iqiniso lokuthi likhanya kakhulu kusikisela ukuthi ingaphezulu lalo libushelelezi kakhulu.
Intambo yombala ye-Smartfil PLA 3D850
Kuyinto a i-filament eyenziwe nge-PLA eyenzelwe ngokukhethekile ukuphrintwa kwe-3D yi-Nature Works, iyabola futhi ine- ukuncipha okushisayo okuphansi kakhulu. Ilungele ukuphrinta ezidinga ukulungiswa okuphezulu lapho imininingwane incane kakhulu. Inzuzo enkulu yayo i-crystallization yayo esheshayo, evumela ukwenza izingxenye eziyinkimbinkimbi kakhulu ngaphandle kokuxhaswa, kanye nokukwazi ukuphrinta ngesivinini esikhulu. Le ntambo ayidingi umbhede oshisayo futhi inayo izakhiwo eziphakeme zemishini nezishisayo kune-PLA ejwayelekile. Lokhu okuqukethwe kuprinta ngokuphelele kuma-degree angama-200 futhi kupholile ngokushesha ngakho-ke asikho isidingo se-fan yesendlalelo ngaphandle kwezingxenye ezincane. Sikushiyela izithombe ezimbalwa zalokho okubalulekile
Intambo ye-Smartfil EP
Lokhu kwaziswa se kunyatheliswa ngo-200 ºC, ayilwi futhi kulula ukuyisebenzisa emshinini ukuze uthuthukise ukuphela komhlaba. Lezi zici zihlangene nokuthi iqine kakhulu kune-PLA ikwenza kube yinto ekahle kulabo abazinikele kwezobuciko, ezokwakha, imikhakha yezidalwa zedemological, uma benza amamodeli, ukubuyiselwa, ukulingiswa kwezithombe, njll. Umenzi uqinisekisa ukuthi Ingapendwa nganoma yiluphi uhlobo lopende futhi isiphetho esihle kakhulu siyatholakala.
Izinto ezake zanyatheliswa zine- ukuthungwa okuthambile kakhulu okusikhumbuza into yobumbaNgaphezu kwalokho, uma siyifaka esihlabathini, sibhebhethekisa indawo futhi sisule imigqa ebangelwe ukulungiswa kwesithombe ngasinye, esithombeni esilandelayo ungabona ukuthi sandile indawo ethile yesibalo ukuze ukwazi ukubona umehluko.
Kodwa-ke, sibe nezinkinga lapho sinyathelisa ngale nto futhi kube nzima kithina ukugcina ivolumu engaguquguquki yentambo mhlawumbe ngenxa yekhwalithi embi ye-bowden extruder efaka iphrinta ye-Anet A2 Plus esiyisebenzisile. Okucacayo yilokho Kuzofanele wenze izivivinyo ezimbalwa nge-extruder yephrinta yakho ukuze uzuze ukugeleza okungaguquguquki futhi okufanayo. Enye imininingwane ebalulekile ukuthi intambo kuphola kancane kakhulu ngakho-ke kubalulekile ukusebenzisa umlandeli wesendlalelo ngaso sonke isikhathi.
Isiphetho kuma-3D Smart materials Filaments
Ukuhlaziya amasampula amanani amancane emicu enezakhiwo ezihluke kakhulu kuhlale kunzima, ngoba kufanele kubhekwe ukuthi uma kwenzeka ingxenye ingahambi kahle, awunakho okunye okwengeziwe ongakuphrinta futhi.
Kungakho sikhethe izingcezu ezi-2 ezilula kakhulu ukuziphrinta futhi siziphrinte ngendlela efanayo nokucushwa ngazo zonke izinto zokwakha. Yize kuliqiniso ukuthi ngale ndlela awukwazi ukubona into ngayinye ebukhazikhazini bayo, kuyakusiza ukuthola umbono oseduze wokuthi yini esingayilindela kulowo nalowo kubo.
Simangele ngokujabulisayo ngezinhlobonhlobo ezithunyelwe, impahla ngayinye ihlukile futhi inezakhiwo ezihlukile ezibenza babe ukhetho oluthakazelisa kakhulu.
Le vase ephrintiwe nge-Smartfil Glase enamathele kwimodi yengilazi futhi ebushelelezi ngotshwala kungaba yinto emangalisayo. Lesi sithombe Iphrintwe ku-Smartifil EP futhi kamuva isandwe, ngokuqinisekile iyisipho esihle kakhulu soSuku Lomama olulandelayo. Icala i-smartfil Boun izovikela i-iphone yethu ekuweni okunamandla kakhulu ... amathuba cishe angapheli futhi Izinto ze-Smart 3D isinikeza ukwaziswa okwenza zigcwaliseke ngemicu esezingeni eliphakeme.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Sihlaziya imicu exotic kakhulu ye-Smart materials 3D
Ngingathanda ukwazi ngentambo ehambisa ugesi ukwenza ukuphrinta okungu-3 D bese kuyiyisa ethangini le-electrolytic, iyiphi oyincomayo?